mardi, 05 juillet 2022 20:20
mardi, 05 juillet 2022 14:34
mardi, 05 juillet 2022 14:26
vendredi, 01 juillet 2022 20:54
Lovobe Morondava : Tonga nankahery sy nitondra fanampiana ho an'ireo niharam-boina i Tinoka Roberto, minisitra mpiahy an'i Menabe
Nitrangana fanampoizinana ara-tsakafo, ka nahafatesana olona miisa 14, ary 54 kosa nampidirina hopitaly tao amin'ny Fokontany Lovobe, Distrika Morondava , Faritra Menabe. Tonga taty an-toerana ny minisitry ny tanora sy ny Fanatanjahantena, sady Minisitra mpiahy ny Faritra Menabe, Tinoka Roberto, iraky ny fitondram-panjakana, izay tarihin'ny Filoha Andry Rajoelina sy ny Praiministra Ntsay Christian.
jeudi, 30 juin 2022 19:32
CEPE 2022 : Fari-piadidiam-pampianarana miisa 100 amin’ny 114 no efa namoaka valim-panadinana
Efa saika mivoaka avokoa amin’ny ankapobeny ny valim-panadinana CEPE 2022 manerana an’i Madagasikara amin’izao fotoana izao. Fari-piadidiam-pampianarana miisa 100 amin’ny 114 no efa namoaka valim-panadinana rehetra, raha ny hita ao amin’ny antotanisan’ny tranokalan’ny Ministeran’ny fanabeazam-pirenena. Niisa 525 111 ny mpiadina CEPE voasoratra anarana nandritra ny fanadinana, ka 107 no mila fanampiana manokana : 16 amin' ireo jamba, 19 ireo manana olana amin’ny fahitana, 57 ireo marenina, ary 15 ireo manana kilema. Miisa 1997 ireo ivon-toeram-panadinana, izay ahitana efitranom-panadinana miisa 15 944. Efa miomana sahady amin’ny fikarakarana ny fanadinam-panjakana BEPC ny Ministera, sy ireo fari-piadidiam-pampianarana izay efa nahavita namoaka tanteraka ny valim-panadinana CEPE amin’izao fotoana izao.
jeudi, 30 juin 2022 18:26
Ministeran'ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-Tsiansa : Roso ny fanatanterahana Oniversite manakaiky Vahoaka
Tontosa ny 28 sy 29 jona teny amin’ny CCI Ivato ny fihaonana eo amin’ny mpikambanana ao amin'ny governemanta izay tarihin'ny Praiminisitra Lehiben'ny governemanta, Ntsay Christian sy ny Solombavambahoaka, fihaonana izay voafaritry ny Lalàmpanorenana ho fampandehanana ny raharaham-pirenena. Nandritra ny andro voalohany dia nanao tatitra ny Praiminisitra Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian mahakasika ny asa vitan'ny ministera tsirairay. Ho an'ny Ministeran'ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-Tsiansa dia vita tanteraka ny fananganana Oniversite, fa miandry fampitaovana sisa ao Soavinandriana- (Itasy), Fenoarivo Antsinanana (Analanjorofo).
Noraisin’ny Praiminisitra Ntsay Christian teny amin’ny Lapam-panjakana Mahazoarivo ny alatsinainy 20 jona hariva ny solontena avy amin’ireo Solombavambahoakan’i Madagasikara, niara-nidinika momba ny fikasan’izy ireo hanatsara ny fandriam-pahalemana manerana ny Nosy. Araka ny fanazavàna nentin’ireto solontena ireto dia heverina fa manampy amin’ny fifehezana ny fandriam-pahalemana ny fampiharana ny DINAn’ny Faritra. Teo no nipoiran’ny hevitra hikatsahana ny tombontsoa iombonan’ny Malagasy rehetra, ka nitovian’ny fomba fijery, dia ny hamerenana ny fampiharana ny DINA manerana ny Faritra 23, araka ny fifanarahana nisy eo anivon’ny fokonolona eny ifotony sy tapaka teny anivon’ny fitsarana.
mardi, 15 mars 2022 17:18
Fifandraisan-davitra : 38,25% ny tokantrano eto an-drenivohitra no mampiasa finday
Manodidina ny 38,25% ny tokantrano malagasy eto an-drenivohitra no mampiasa ny fifandraisan-davitra amin’ny alalan’ny finday, ary 17% kosa eny amin’ny tontolo ambanivohitra. Anisany nivoitra io androany Talata 15 martsa nankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny zon’ny mpanjifa, natao tao amin'ny Antenimieran'ny varotra sy ny indostria etsy Antaninarenina. Araka ny antontan'isa avy amin’ny ARTEC (Rafitra mahefa amin’ny fanaraha-maso momba ny fampanaraham-penitra) dia manodidina ny 20 000Ar, isan-tokantrano, isam-bolana, no lany amin’ny fifandraisan-davitra manaraka ny teknolojia vaovao. Rariny raha toa ka hijerena vahaolana maharitra ny fiarovana ny mpanjifa eo amin’io sehatry ny tontolo nomerika io.
mardi, 15 mars 2022 16:15
Mpanao asa-tanana : Hisitraka fiahiana sosialy avy amin’ny CNAPS
Nosantarina androany ny fiaraha-miasa eo amin’ny ministeran’ny Asa-tanana sy Hai-tao miaraka amin’ny Fitaleavan’ny hetra (DGI), ny CNAPS, ny banky BNI ary ny fandaharan’asa Fihariana. Hisitraka tombotsoa samihafa ireo mpanao asa-tanana malagasy manomboka eto. Tamin’ny volana janoary 2022 no natao sonia ny fifanaraham-piaraha-miasa. Tombotsoa ho azo amin’izany ny fisitrahana ny fiahiana sosialy avy amin’ny CNAPS. Ny fazahoana fampindramam-bola avy amin’ny banky BNI, izay azahoana taha ambany kokoa, ary fahafahana tsy mamerim-bola ao anatin’ny enina Volana voalohany. Ireo mpanao asa-tanana mikambana anaty fikambanana, ary manana ny karatra maha-matihanina no hisitraka izany tombotsoa izany. Fikambanana 29 no nanaraka ny fanazavana sy ny fampahafantarana ny momba azy ity androany tetsy amin’ny ministeran’ny Asa-tanana sy Hai-tao.
mercredi, 09 mars 2022 08:13
Fahasalamana - Covid-19 : Tsy nahazo karama efa roa volana ny mpiasan'ny CTC
Tsy nandray karama mihitsy ny volana janoary sy febroary 2022 ireo mpiasan'ny toeram-pitsaboana vonjimaika entina miady amin'ny valanaretina Covid-19 na ny CTC. Nisy anefa fifanarahan'asa nifanaovana tamin'izy ireo, ka gaga ihany izahay hoy ireto mpiasa ireto raha ampiditra mpiasa ny fanjakana nefa tsy vonona akory ny enti-manana amin'izany. Tsy CTC iray no tsy nandray karama fa izy rehetra mihitsy. Ary dia ilana fiantsoana mpanao gazety lava hatrany ve vao ahazo ny tambi-karamany ireo mpiasa manolotra ny ainy miady amin'ity areti-mandripaka olona maro ity, hoy hatrany ireto solo-tenan'ny mpiasa ireto.